श्रावन २०७७ २४	शनिबार, 8 Aug 2020 पञ्चमी, कृष्ण पक्ष
सुर्योदय: बिहान ०५:२६, सुर्यास्त: बेलुका ०६:४४ चन्द्रास्त: बिहान ०९:२२, चन्द्रोदय: रात्रि ०९:४५
- पास्नी: ११, १९, २५
18 August 2019 आइतबार तृतिया, कृष्ण पक्ष शिंह संक्रान्ती बाघभैरव जात्रा ओल्केपर्व बाघभैरव जात्रा ओल्केपर्व
23 August 2019 शुक्रबार अष्ठमी, कृष्ण पक्ष श्री कृष्ण जन्माष्ठमी मोहरात्रि गौरापर्व अष्टमी व्रत दुर्वाष्टमी
26 August 2019 सोमबार एकादशी, कृष्ण पक्ष अजा एकादशी
30 August 2019 शुक्रबार औंशी, कृष्ण पक्ष बुवाको मुख हेर्ने दिन कुशे औंसी दर्श औंसी मन्वादि: हलो/निशि बार्ने
2 September 2019 सोमबार तृतिया, शुक्ल पक्ष हरितालीका तीज गणेश चतुर्थी वराह जयन्ती चन्द्र दर्शन दोष चथाः
१७ भाद्र २०७६
3 September 2019 मंगलबार चतुर्थी, शुक्ल पक्ष ऋषि पञ्चमी सप्तऋषि पूजा मंगल-चतुर्थी व्रत क्वोखजाविय
9 September 2019 सोमबार एकादशी, शुक्ल पक्ष हरिपरिवर्तनी एकादशी
13 September 2019 शुक्रबार चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष ईन्द्रजात्रा पूर्णिमा श्राद्ध पूर्णिमा व्रत
२८ भाद्र २०७६
14 September 2019 शनिबार पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा सोह्रश्राद्ध आरम्भ प्रतिप्रदा श्राद्धम् चोनाम पर्व
18 September 2019 बुधबार चतुर्थी, कृष्ण पक्ष बिस्वकर्मा पूजा कन्या संक्रान्ती विज्ञान दिवस चतुर्थी श्राद्धम्
20 September 2019 शुक्रबार षष्ठी, कृष्ण पक्ष संविधान दिवस षष्ठी श्राद्धम्
- पास्नी शुभ साइत: ११, १९, २५
नृसिंह यात्रा आज - श्रावन २४
बलराम जयन्ती भोलि - श्रावन २५
आदिवासी दिवस भोलि - श्रावन २५
श्री कृष्ण जन्माष्ठमी ३ दिन पछि - श्रावन २७
मोहरात्रि ३ दिन पछि - श्रावन २७
अष्टमी व्रत ३ दिन पछि - श्रावन २७
गोरखकाली पूजा ३ दिन पछि - श्रावन २७
मन्वादि ३ दिन पछि - श्रावन २७
श्री कृष्ण रथयात्रा ४ दिन पछि - श्रावन २८
विराटनगर श्री राधाकृष्ण रथयात्रा ४ दिन पछि - श्रावन २८
युवा दिवस ४ दिन पछि - श्रावन २८
गुगा नवमी ५ दिन पछि - श्रावन २९
भिम यात्रा ५ दिन पछि - श्रावन २९
अजा एकादशी ७ दिन पछि - श्रावन ३१
प्रदोष व्रत ८ दिन पछि - श्रावन ३२
जुगच:ह्रे पूजा ९ दिन पछि - भाद्र १
शिंह संक्रान्ती ९ दिन पछि - भाद्र १
बाघभैरव जात्रा ९ दिन पछि - भाद्र १
ओल्केपर्व ९ दिन पछि - भाद्र १
दर्श औंसी १० दिन पछि - भाद्र २
मेष ( च, चू, चे, ला, ली, लू, ले, लो, अ, आ ) आफ्नो शारीरिक तन्दुरूस्ती कायम गर्नको लागि तपाईंले आज केही खेल गतिविधिहरूको आनन्द लिने सम्भावना छ।	अनपेक्षित बिलले आर्थिक बोझ बढाउनेछ।	तपाईंको ज्ञान र राम्रो हास्यले तपाईंका वरिपरिका मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्।	कसैले पनि तपाईंको प्रेम अलग गर्न सक्ने छैन।	तपाईंले सामाजिक मिडियामा वैवाहिक जीवनका ठट्यौलीहरू पाइ राख्नु हुन्छ, तर आज तपाईं आफ्नो वैवाहिक जीवन बारेमा अचम्म लाग्ने सुन्दर तथ्य आफ्नो अगाडि आउँदा साँच्चै भावुक हुनु हुनेछ।
वृष ( ई, उ, ए, ऐ, ओ, व, वा, वो, वे, वौ, वं ) आज तपाईंले धेरै खिचलो र फरक विचारहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जसले तपाईंले रिस उठ्ने र अप्ठ्यारो गर्नेछ।	आफ्नो जीवनमा एउटा उदात्त तालको फेशन बनाउनुहोस् र आत्मसमर्पणको मोल बुझेर हृदयमा प्रेम र कृतज्ञता राखेर सीधा हिंड्ने कला सिक्नुहोस्। यसले तपाईंको पारिवारिक जीवन अर्थपूर्ण बनाउनेछ।	तपाईं विपरीत लिंगीहरूको लोकप्रिय र सजिलै आकर्षित सदस्य हुनुहुनेछ।	सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ।	यो दिन तपाईंका जीवनको वसन्त जस्तै छ; रोमान्सले पूर्ण, तपाईं र तपाईंको जीवनसाथी।
मिथुन ( क, का, की, कू, के, को, कौ, छ, ह, हा, छा ) तपाईंको लागि सबै भन्दा राम्रो के हो भन्ने मात्र तपाईंलाई थाहा छ - त्यसैले बलियो र साहसी भएर र छिट्टै निर्णय लिनुहोस् र परिणामसँग बस्नुहोस्।	बच्चाहरुले केही रोमाञ्चकारी समाचार ल्याउन सक्छन्।	रोमान्टिक भावनाहरू आज फेरिनेछन्।	आज गरेको निर्माण कार्य तपाईंको इच्छा अनुसार पूरा हुनेछ।	आज, तपाईंले आफ्नो विवाहको दिन गरेका सबै भाकल साँचा रहेछन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ। आफ्नो जोडी तपाईंको प्राण हो।
कर्कट ( हि, हू, हे, हो, डा, डी, डू, ड़, डे, डो ) भाग्यमा निर्भर नहुनुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्यको सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि भाग्य तपाईंसँग कहिल्यै नआउने अल्छी देवी हो। यो आफ्नो स्वास्थ्य प्राप्त गर्नको लागि तपाईंले आफ्नो वजन नियन्त्रण गर्ने र पुनः व्यायाम सुरु गर्ने सही समय हो।	अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ।	परिवारको दायित्व नबिर्सिनुहोस्।	कसैको लागि बिहेको बाजा र कसैले आफुलाई ठूलो सोखमा राख्ने रोमान्स पाउनुहुनेछ।	तपाईं किनमेलको लागि जानुभयो भने धेरै खर्चालु नहुनुहोस्।	के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
शिंह ( म, मा, मी, मू, मे, मो, मौ, मं, ट, टा, टी़, टू, टो ) एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ।	आफ्नो जोडीसित घरेलू काम सक्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्।	तपाईंले आफ्नो प्रियको काखमा सान्त्वना पाउनुहुनेछ।	तपाईंको जीवनसाथीले तपाईंको कमजोरीलाई अंगाल्नेछ। यसले तपाईंलाई खुशी महसुस गराउनेछ।
कन्या ( पा, प, पु, पं, प, पे, पो, पौ, टो ) आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न पुनः सुरु गर्नको लागि सर्वश्रेष्ठ दिन।	आफन्तहरूको सहयोग प्रदान गर्नुहोस् र आफ्नो मन गह्रुँगो हुने चिन्ता हटाउनुहोस्।	के तपाईंले कहिल्यै अदुवा र गुलाबसँगको चकलेट सुँघ्नुभएको छ? तपाईंको प्रेमी जीवन आज त्यस्तै स्वादिलो हुनेछ।	तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ।	आँखाले सबै कुरा भन्छ, र आज तपाईंले आफ्नो जोडीसित आँखा जुदाएर भावनात्मक बातचीत गर्नु हुनेछ।
तुला ( र, रा, री, रु, रे, रो, रं, ता, त, तू, ते, तो, ती ) आफ्नो बाध्यात्मक भावना र धडकनहरूमा रोक लगाउनुहोस्। आफ्ना रूढिवादी सोच / पुराना विचारहरूले तपाईंको प्रगतिमा बाधा ल्याउँछ, विकास गडबडाउँछ र अगाडि बढ्न बाधा दिन सक्छ।	बुद्धिमानी तरीकाले निवेश गर्नाले मात्र लाभ हुनेछ - त्यसैले तपाईंले दुखले कमाएका पैसा राम्रो ठाउँमा निवेश गर्नु हुँदैछ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्।	तपाईंको अवस्था र आवश्यकता बुझ्ने घनिष्ठ मित्रसँग बाहिर जानुहोस्।	तपाईं आज आफ्नो वरिपरि सबैतिर आफ्नी प्रियतमाको प्रेम महसुस गर्नुहुनेछ। यो एउटा सुन्दर प्यारो दिन हो।	तपाईंको जोडी आज रमाइलो मुडमा छन्, तपाईंलाईले उनलाई आवश्यक सबै सहयोग दिएर आजलाई आफ्नो वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बनाउन उनलाई मद्दत गर्नु पर्नेछ।
वृश्चिक ( न, ना, नी, नु, ने, नो, नै, नं, या, यी, यू, य ) तपाईंलाई ढाक्ने र तपाईंको प्रगतिमा बाधा गर्ने दुःखलाई टाढा फ्याँकिदिनुहोस्।	हल नभएका मुद्दाहरू कठिन बन्नेछन् र खर्चले तपाईंको मन मन ढाक्नेछ।	तपाईं संगै बस्ने कोई आजको तपाईंको हालको नराम्रा कार्यहरूले रिसाउनेछ।	तपाईंको प्रेममा अनुमोदन नहुन सक्छ।	कामको दबाबले लामो समयदेखि तपाईंको वैवाहिक जीवनमा व्यवधान दिंदै थियो। तर, आज सबै शिकायतहरू समाप्त हुनेछन्।
धनु ( ये, यो, ध, धा, धी, धू, धे, फ, भा, भी, भू, भे ) आज तपाईं आशाको जादू अन्तर्गत हुनुहुन्छ।	पत्नीका मामिलाहरूमा तपाईंको हस्तक्षेपले उनलाई उन्मादी बनाउन सक्छ। रीसबाट जोगिनको लागि उनको अनुमति लिनुहोस्। तपाईं सजिलैसँग समस्याबाट जोगिन सक्नु हुनेछ।	व्यस्त सडकमा तपाईंले आफुलाई भाग्यमानी भएको महसुस गर्नुहुनेछ किनकि तपाईंकी प्रियतमा सबैभन्दा राम्री छन्।	तपाईं आज थाहा पाउनुहुनेछ कि विवाह भगवानले नै जुराएको हो।
मकर ( भो, ज, जा, जी, जे, जो, जै, जं, ख, खी, खू, खो, ग, गा,गी ) धेरै क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो व्यायाम तिर ध्यान दिनुहोस्।	तपाईंको काममा दबाव कम हुने र परिवारका सदस्यहरूसँग समय काट्ने उचित दिन।	सुंदर मुस्कानले आफ्नो प्रेमीको दिन उज्यालो पार्नुहोस्।	आफ्नो जोडीले जब सबै कुराहरू भूलेर तपाईंलाई माया गरेर अँगाल्नेछन्, तब जीवन साँच्चै रोमाञ्चक हुनेछ।
कुंभ ( गु, गे, गो, स, सा, सी, सु, से, सं, सो, सौ, द, दा ) कसैले तपाईंलाई एउटा अचानु बनाउने प्रयास गर्न सक्छ, ध्यान दिनुहोस्। तनाउ र खिचलो बढ्ने सम्भावना छ।	टाढाको आफन्तबाट अप्रत्याशित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा खुसी ल्याउनेछ।	व्यक्तिगत निर्देशनले तपाईंको सम्बन्ध सुधार हुनेछ।	यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन हो; तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
मीन ( दि, दू, झं, थ, था, दे, दो, च, चा, ची ) तपाईंको आशा धेरै सुगन्धित र अचम्मलाग्दा फूल जस्तै फुल्नेछ।	तपाईंलाई व्यापार क्रेडिटको दृष्टिकोणले भेट गर्न आउनेहरूको वास्ता नगर्नुहोस्।	एक-अर्काको मत बुधेर व्यक्तिगत समस्याको समाधान गर्नुहोस्। यिनीहरूलाई सार्वजनिक नगर्नुहोस् अन्यथा तपाईंलाई बदनामी गर्ने सम्भावना धेरै छ।	आज आफ्नो प्रेमीलाई केही भावनात्मक कुरा नभन्नु होला।	तपाईंले आफ्नो वैवाहिक जीवन नीरस भएको पाउन सक्नुहुनेछ। केही खुशी मनाउनुहोस्।
श्री कृष्ण जन्माष्ठमी २७ श्रावन, ३ दिन
कुशे औंसी ३ भाद्र, ११ दिन
बुवाको मुख हेर्ने दिन ३ भाद्र, ११ दिन
हरितालीका तीज ५ भाद्र, १३ दिन
गणेश चतुर्थी ६ भाद्र, १४ दिन
ऋषि पञ्चमी ७ भाद्र, १५ दिन
ईन्द्रजात्रा १६ भाद्र, २४ दिन
जितिया पर्व २५ भाद्र, १ महिना ३ दिन
संविधान दिवस ३ असोज, १ महिना १२ दिन
घटस्थापना १ कार्तिक, २ महिना १० दिन
बिजया दशमी १० कार्तिक, २ महिना १९ दिन
करवा चौथ १९ कार्तिक, २ महिना २८ दिन
फाल्गुनन्द जयन्ती २५ कार्तिक, ३ महिना ४ दिन
काग तिहार २८ कार्तिक, ३ महिना ७ दिन
धन तेरस २८ कार्तिक, ३ महिना ७ दिन
लक्ष्मी पूजा २९ कार्तिक, ३ महिना ८ दिन
कुकुर तिहार २९ कार्तिक, ३ महिना ८ दिन
म्ह: पूजा ३० कार्तिक, ३ महिना ९ दिन
भाई टिका १ मंसिर, ३ महिना १० दिन
छट पूजा ५ मंसिर, ३ महिना १४ दिन
गुरु नानक जयन्ती १५ मंसिर, ३ महिना २४ दिन
बाला चतुर्दशी २८ मंसिर, ४ महिना ७ दिन
विवाह पञ्चमी ४ पौष, ४ महिना १३ दिन
उधौली पर्व १५ पौष, ४ महिना २४ दिन
तमु ल्होसार १५ पौष, ४ महिना २४ दिन
योमरी पुन्हि १५ पौष, ४ महिना २४ दिन
नयाँ वर्ष (एडी) १७ पौष, ४ महिना २६ दिन
तिलको लड्डु खाने दिन १ माघ, ५ महिना ९ दिन
तोल् ल्होसार १ माघ, ५ महिना ९ दिन
श्री स्वस्थानी पूर्णिमा १५ माघ, ५ महिना २३ दिन
सोनम् ल्होसार ३० माघ, ६ महिना ८ दिन
भ्यालेन्टाइन डे २ फागुन, ६ महिना १० दिन
सरस्वती पूजा ४ फागुन, ६ महिना १२ दिन
प्रजातन्त्र दिवस ७ फागुन, ६ महिना १५ दिन
नारी दिवस २४ फागुन, ७ महिना २ दिन
महा शिवरात्रि २७ फागुन, ७ महिना ५ दिन
ग्याल्बो ल्होसार १ चैत्र, ७ महिना ८ दिन
होली १५ चैत्र, ७ महिना २२ दिन
एप्रिल फूल डे १९ चैत्र, ७ महिना २६ दिन
घोडेजात्रा २९ चैत्र, ८ महिना ६ दिन
नयाँ वर्ष १ बैशाख, ८ महिना ९ दिन
राम नवमी ८ बैशाख, ८ महिना १६ दिन
लोकतन्त्र दिवस ११ बैशाख, ८ महिना १९ दिन
आमाको मुख हेर्ने दिन २८ बैशाख, ९ महिना ६ दिन
अक्षय तृतीया १ जेष्ठ, ९ महिना १० दिन
बुद्ध पूर्णिमा १२ जेष्ठ, ९ महिना २१ दिन
गणतन्त्र दिवस १५ जेष्ठ, ९ महिना २४ दिन
दहिचिउरा खाने दिन १५ आषाढ, १० महिना २५ दिन
मित्रता दिवस १ श्रावन, ११ महिना १२ दिन
गुरु पूर्णिमा ९ श्रावन, ११ महिना २० दिन
खिर खाने दिन १५ श्रावन, ११ महिना २६ दिन
नाग पञ्चमी २९ श्रावन, १२ महिना १० दिन
जनै पूर्णिमा ६ भाद्र, १२ महिना १९ दिन
रक्षा बन्धन ६ भाद्र, १२ महिना १९ दिन